मास्क लगाउदा असर हुन्छ कि हुँदैन् ?
भाद्र १७, काठमाडाैं । कोरोनाभाइरसको महामारीले मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइदिएको छ । भाइरसको संक्रमण रोक्ने एक प्रमुख उपाय मध्येको एक हो मास्कको प्रयोग । कोरोनाभाइरसको अहिलेसम्म कुनै खोप तथा अचुक औषधि छैन त्यसैले पनि यसबाट बच्ने उपयुक्त उपाय भनेको जनस्वास्थयका नियमहरुको कठोर पालना नै हो । तीमध्ये पनि सबैभन्दा मुख्य सामाजिक दुरी कायम गर्नु अनि मास्कको उचित प्रयोग गर्नु नै हो ।
हाम्रो जिज्ञासाको प्रत्युत्तरमा डा. उप्रेतीले ‘त्यसमा कुनै सत्यता नभएको’ जानकारी दिएका छन् । ‘कोरोनाभाइरसको महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा मास्कको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने यस्ता अफवाहको पछि लाग्नु खतरनाक हुने’ उनको कथन छ ।
‘मास्कको प्रयोगले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछ भनेर आजसम्म कुनै पनि अनुसन्धानले तथ्य स्थापित नगरेको स्थितिमा त्यस्ता अफवाहको विश्वास गरेर मास्कको प्रयोगबारे भ्रममा नपर्न’ उनको सल्लाह छ ।
यतिबेला, मास्क लगाउँदा हाम्रो शरीरलाई चाहिने अक्सिजनको मात्रामा कमी हुने दावी गरिएका भिडियोहरु अहिले सामाजिक साञ्जालमा प्रचारमा छन् । त्यसैगरी, लामो समय मास्क लगाउँदा हाम्रो शरीरले बाहिर फाल्ने कार्वनडाइक्साइड पूनः शरीरले लिने र यसले अर्को समस्या निम्तिन सक्ने तर्फ पनि त्यस्ता भिडियोहरुमा गराइएको पाइन्छ ।
तर चिकित्सा विज्ञानले भने त्यस कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ । वास्तवमा, कुनै पनि संक्रमणबाट बच्न र वायु प्रदुषणबाट बच्न अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
त्यसैले पनि मास्कको प्रयोगलाई स्वास्थ्य संगठनहरुले अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न भनिरहेका छन् । खोक्दा वा हाँच्छ्यू गर्दा कोरोनाभाइरस एक्लै निस्किदैन त्यो त थुकको छिटाहरुसँगै बाहिर निस्कने हो । त्यसप्रक्रियामा निस्कने थुकका छिटाहरु हाम्रो आँखाले देख्दा त स–सानो आकारमा नै निस्किन्छ ।
तर त्यस्ता छिटाहरुको साइज ५ माइक्रोमिटर भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ । त्यस्ता छिटाहरुलाई मास्कले सजिलै रोक्छ । यस अर्थमा पनि अहिलको संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा मास्क लगाउँदा बेफाइदा होइन फाइदा नै हुन्छ ।
घरबाहिर निस्किदा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्छ । मास्क लगाउनु अगाडि र मास्क खोलेपछि अनिवार्य सावुनपानीले हात धुनुपर्छ । घरबाहिर भीडभाडमा जाँदा वा अर्को व्यक्तिसँगको सम्पर्कमा जाँदा संक्रमण सर्न सक्छ ।
आफूमा संक्रमण छ भने पनि अरुलाई सार्नबाट जोगाउन सकिने भएकाले मास्कको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । मास्कले सम्भावित जोखिमबाट बचाउँछ, त्यसैले यसको प्रयोगमा कन्जुस्याइँ नगरौं, हल्लाको पछि नलागौं ।
त्यसैगरी, घरबाहिर निस्किँदा भने अनिवार्य मास्क लगाउने । तपाईं कसैको सम्पर्कमा जादैँ हुनुहुन्छ भने मास्क लगाएर नै कुराकानी गर्नुहोस् ।
तपाई कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ र कार्यालयमा तपाईंको क्याविन छ भने कार्यालय समयमा मास्क नलगाई बस्न सकिन्छ तर तपाईसँग अरु सहकर्मी छन् भने मास्क लगाउनुपर्छ । बाटोमा हिँड्दा पनि अरु मानिस छैन भनेर मास्क खोल्ने वा चिउडोमा मास्क लगाएर हिँड्ने काम विलकुलै नगरौं यो निकै घातक हुन सक्छ ।
सर्जिकल मास्कमा तीन तह हुन्छ । माथिल्लो तहलाई तरल पदार्थले भिजाउन सक्दैन र बीचको तहले साना साना कणहरुलाई पनि छेक्न सक्ने क्षमता राख्छ । र, भित्री तहले नाकमुखबाट निस्किने वाफ र छिटालाई सोस्छ । हामीले खोक्दा तथा हाँच्छिउँ गर्दा निस्कने छिटालाई बाहिर जानबाट रोक्छ ।
यस्तो मास्क चिकित्सकहरुले शल्यक्रियाको समयमा समेत प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यस्तो मास्कले भाइरसलाई भित्र पस्नबाट पुरै रोकने होइन तर यदि हामीमा संक्रमण छ भने चाहिँ किटाणु बाहिर जानबाट भने रोक्छ । त्यसैले पनि सर्वसाधारणले अझ संक्रमित व्यक्तिले सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्नु उचित मानिएको हो ।